:Bọchị: February 12, 2020
Ememe ncheta ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ nke 145st nke Karaköy, ụzọ nke abụọ nke ụwa, yana ụbọchị ọmụmụ 106th nke Nostalgic Tram, ihe dị mkpa nke Istiklal Street, mere. Ndi akpochapu egwu egwu a emere ka atumatu a ka akagbuo n'ihi akuko nke ndi ori si Idlib. Beyoglu [More ...]
Ndị ọrụ gọọmentị ga-arụ ọrụ na ngalaba ọrụ nke Ministry of Health na ngalaba dị na ngalaba nke Iwu nke 657 nke Civil Servants Law No. 4 (paragraf B) na Nkeji edemede 663 / A nke Iwu Iwu Nke 45. [More ...]
Onye isi oche ETO Metin Güler kwusiri ike na ngosi okporo ụzọ na mgbakọ ga-eme n'obodo anyị n'ọnwa Eprel ga-atụnye ụtụ ike nke Eskişehir na ịkwalite mpaghara usoro ụzọ ụgbọ oloko gburugburu ụwa. Ederede nke Eskişehir Chamber of Commerce [More ...]
Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavaş mara ọkwa na ha na-arụ ọrụ na eriri metro ọhụrụ ga-agafe Mamak. Ezie n’ahịrị ohuru nke ga-agbago ọwụwa anyanwụ nke isi obodo ahụ ka a ga-eme ka ọ bụrụ nke isii, a na-achọ akụ maka ọrụ a. ọhụrụ [More ...]
Nyochaa ụzọ ụgbọ oloko na tram na Bursa na isoro ndị isi obodo Mịnịstrị nke Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, Onye isi Ekrem Yüce kwuru, “systemszọ ụgbọ okporo igwe dị ọcha nke anyị bu n’obi ime n’obodo anyị bụ ihe kachasị mkpa na nleta ụgbọ ala Bursa. [More ...]
Ndị ọrụ ụgbọ ala napụtara nkịta ahụ, onye aka ya dabara ọnyà na onye mgbapụ na ọdụ ụgbọ oloko Kadıköy. Onye nwe nkịta ahụ, Fatma Kamuran Koç, jiri nkịta ya na-eleta ndị na-eje ozi. Kadıköy - Tavsantepe Metro Line na ọdụ Kadikoy [More ...]
Courtlọ ikpe Iwu (AYM) ji otu olu kagbuo arịrịọ nke ịkwụsị onye isi, na-atụle ntinye nke Cumhuriyet Halk Party (CHP) onye isi otu Ergin Altay, Özgür Özel na Engin Özkoç na ndị nnọchiteanya Kanal Istanbul 139. [More ...]
ÇerkezköyE mere nzukọ nlele n'okpuru onyeisi oche nke Mayor anyị Vahap Akay iji chọpụta nsogbu ụgbọ njem nke nwere ike ibute n'obodo anyị na iji dozie nsogbu ndị a na eriri okporo ụzọ dị elu ga-agafe. elu [More ...]
N’ịza ajụjụ nke CHP Istanbul Vice Mahmut Tanal, Minista Mịnịstrị na-ahụ maka ụgbọ njem Mehmet Cahit Turhan kwuru na a na-achụpụ ndị ọrụ 6 na ndị ọrụ gọọmentị, a na-ama onye ọrụ 1 ikpe ịbelata kwa ọnwa. [More ...]
Onye isi obodo Sivas Hilmi Bilgin zutere ndị isi agbata obi na nnọkọ ahụ. Na nzukọ a na-eme na Hot Çermik Sefa Hotel, ma e wezụga Onyeisi Bilgin, ndị isi oche, Onye isi nke Muhtars Association, Cemalettin Arslan. [More ...]
TCDD 5th Regional Directorate na-aga n'ihu itinye ego ya na mpaghara ọrụ. Akukoputara na Mpaghara Directorate tinye 2019 million 21 puku TL na oru iri abuo na ato na 87. 600 Ihe oru ngo na Malatya [More ...]
Otoyol Yatırım AŞ, bụ onye duziri ọrụ okporo ụzọ Gebze-İzmir, nke a tụlere nke ukwuu, yana ọnụ ahịa ịlaghachi n'etiti Istanbul na Izmir maka ụgbọ ala n'oge mmeghe ya, bụ nke mba ụwa maka ire ndị nwere ike ire ere. [More ...]
Ọ bụrụ na ịchọrọ eto eto akụkọ mgbasa ozi gị mana ndị na-eso ụzọ gị anaghị abawanye, https://takipciodasi.com/ You nwere ike ikwuputa nnabata akaụntụ Instagram gị na nnukwu mmadụ site na ịga na weebụsaịtị, site na iji uru ego kwa ụbọchị na ọrụ ndị ọzọ kwa elekere. n'oge, [More ...]